Alarobia 23A (Lk. 6, 20-26) 09/09/2020 | FKMP
Alarobia 23A (Lk. 6, 20-26) 09/09/2020
« Tamin’izany andro izany, i Jesoa niatrana nijery an’ireo mpianany, ka nanao hoe: “Sambatra ianareo mahantra, fa anareo ny fanjakan’ny lanitra. Sambatra ianareo noana ankehitriny, fa ho voky ianareo. Sambatra ianareo mitomany ankehitriny, fa hifaly ianareo. Ho sambatra ianareo raha hankahalain’ny olona, horoahiny amin’ny fikambanany, hotevatevainy ary holaviny toy ny zava-dratsy ny anaranareo, noho ny amin’ny Zanak’Olona. Mifalia ianareo amin’izany andro izany ary miravoravoa, fa indro lehibe ny valisoanareo any an-danitra; fa tahaka izany koa no nataon’ny razany tamin’ny mpaminany.
Ny mahantra matetika no mananki-po tanteraka amin’Andriamanitra, ary mahafoy fotoana hanompoana Azy, satria ny asa aman-draharaha ataony dia apetrany eo amin’ Andriamanitra avokoa izany hoe ny fiainany manontolo mihitsy no efa apetrany eo am-pelatanany.
Ny mpanakarena kosa dia variana miahy sy mampitombo ny hareny hany ka lasa ambanin-javatra indraindray Andriamanitra, matetika aza dia manavo sy manambany ary tsy miraharaha ny mpiarabelona aminy koa .
Jeremia 9, 22-23 :
« Izao no lazain’ny Tompo: Aoka ny hendry tsy hirehareha amin’ny fahendreny; ny mahery, tsy hirehareha amin’ny heriny; ny manan-karena, tsy hirehareha amin’ny hareny.
Fa izao no aoka hireharehan’ny mirehareha: Ny ananany saina sy ahalalany ahy. Fa izaho no Tompo izay manao ny famindram-po, sy ny hitsiny ary ny rariny ety ambonin’ny tany, fa izany no ankasitrahako, – teny marin’ny Tompo. »
Previous Post: Talata 23A (Mt 1,1-16.18-23) 08/09/2020
Next Post: Alakamisy 23A (Lk 6,27-38) 10/09/2020